Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Indonezia » Tianao ve ny sakafo Bali? Tongasoa eto Bali
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao farany momba ny Indonezia • Vaovao • People • Tourism • Fitaterana • malaza ankehitriny
Vonona i Bali amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena rehefa manome ny jiro maitso ny manampahefana.
Vonona ihany koa i Bali ary aseho amin'ny fampiharana vaovao mitondra ny lohateny hoe Welcome Back to Bali. Ity fampiharana ity dia hanome ny mpitsidika fampahalalana tena izy momba izay azo atao, sy izay tokony hialana rehefa mandeha any amin'ny Nosy n'Andriamanitra.
Ny Island of the Gods dia miomana hisokatra ho an'ny mpitsidika, saingy mbola tsy mazava ny fotoana ora.
The Fikambanan'ny Hotely Bali androany dia nasaina tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety virtoaly tao amin'ny Grand Hyatt Hotel any Nusa Dua.
Ahoana no tsy hitovizany any Bali, ny dingana voalohany dia ny manondraka vava tsy mampino Fetiben'ny Sakafo maharitra Bali.
Ny Fikambanan'ny Hotely Bali androany dia nanolotra ny «Tongasoa eto Bali» App ho fitaovana ho an'ny fizahantany hamerina handao ity Nosy Indonezia ity, fantatra ihany koa amin'ny hoe Nosy Paradisa.
Manomboka amin'ny tendrombohitra mahafinaritra ka hatrany amin'ny morontsiraka mikitoantoana ka hatrany amin'ny havoana volkano ka hatramin'ny morontsiraka fasika mainty, tsy mahagaga raha fantatra amin'ny anarana hoe Island of the Gods i Bali.
Any anelanelan'ny Nosy Java sy Lombok, Bali dia manana kolontsaina manankarena sy maro karazana izay mampiavaka azy.
“Bali no fiainako” - ity dia fanambarana mahery vaika izay maneho ny zava-misy fa tsy toa ny toerana fizahan-tany ihany i Bali fa nosy tsara tarehy fananana sy iainan'ny Bali no mandray ireo mpitsidika hankafy ny nosy. Amin'ny maha fanambarana azy dia mampihetsi-po, marina ary marina izany, manasa an'izao tontolo izao izy hamantatra ny antony maha-manokana an'i Bali.
Bali dia voan'ny COVID-19 mafy sy ny fanakatonana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahantany.
Herinandro lasa izay dia nanamora ny fameperana COVID-19 an'i Indonezia ny nosy turista malaza Bali, na dia hiatrika protokolotra hentitra kokoa aza ireo mpivezivezy iraisampirenena amin'ny fahatongavany hanakanana ny fiparitahan'ny karazana vaovao, hoy ny minisitra zokiolona ny alatsinainy teo.
Ireo toerana fizahan-tany any amin'ny ankamaroan'ny faritra amin'ny nosy dia hanaiky ny mpitsidika, ny minisitry ny ranomasina ary ny fampiasam-bola Luhut Panjaitan nilaza tamin'ny valan-dresaka virtoaly iray, raha toa ka manaraka ny fepetra hentitra izy ireo, toy ny fanaporofoana ny maha vaksiny azy ireo amin'ny fampiharana finday voamarin'ny governemanta.
Amin'izao fotoana izao, Bali dia toerana itodiana mankany amin'ny tsena anatiny indrindra, satria ny Bandara Den Pasar dia mbola tsy nisokatra ho an'ny fahatongavan'ireo mpitsidika iraisam-pirenena.
Raha ny filazan'ny mpikambana iray ao amin'ny hotel Association, ny mpikambana amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Bali dia mijanona ho be fanantenana ary feno fanantenana sy fientanam-po handefa indray ny dia iraisam-pirenena atsy ho atsy.
Ny Welcome Back App natolotra androany dia loharanom-baovao marim-pototra tokana ho an'ireo mpiala sasatra mba handrafetana sy hitetezana ny dia any Bali am-pilaminana sy andraikitra.
Ny iraka dia ny hanomezana ny mpitsidika sy mpiara-miombon'antoka fizarana vaovao sy vaovao farany indrindra momba ny toe-draharaha any Bali.
Ny fampahalalana dia avy amin'ny loharanom-baovao ofisialy sy voamarina ary mifandraika amin'ny zava-misy any Bali ankehitriny.
Ny vaovao ao amin'ny Tongasoa eto Bali, dia ny fanampiana ireo mpandeha any Bali handray fanapahan-kevitra tsara momba ny fitsangatsanganana any Bali sy ny fijanonana any Bali. Tafiditra ao anatin'izany ny fampahalalana amin'ny torohevitra ofisialy momba ny dia manokana sy ny torohevitra ankapobeny momba ny toe-javatra misy ankehitriny momba ny fameperana sy ny fepetra fitsangatsanganana an-habakabaka any Bali.
Ny mpandeha rehetra dia mila mandray andraikitra amin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo, anisan'izany ny fahazoana izany Tongasoa eto Bali tsy natao ho, ary tsy tokony hianteherana, ho solon'ny toro-hevitra ara-dalàna na momba ny matihanina hafa. Ny mpampiasa dia tokony hahazo torohevitra matihanina mifanaraka amin'ny toe-javatra misy azy manokana.
Tohanan'ny Bali Hotels Association ny tranonkala.
eTurboNews nanatrika ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany.
Konferansa ho an'ny mpanao gazety nataon'ny Bali Hotel Association.